Singoobani-UVictor Rice Mill
sibekwe kwisiXeko samandulo i-Zhengzhou esinegama elihle ledolophu yoomatshini e-China. Besibandakanyeke kushishino loomatshini beefama njengesixhobo sokudibanisa irayisi,umatshini we-paddy irayisi huller,ikamva lerayisi,irayisi grader,isityalo selayisi ,irayisi sorter
, iminyaka elishumi. Zeziphi zisetyenziswa ngokubanzi kwincinci,umhlaba wokulima naphakathi kwelenza inkonzo enkulu, Umgangatho ophezulu, Amaxabiso okhuphiswano, Ukuhanjiswa kwangexesha yintanda-bulumko yethu, sisebenzisana ngokupheleleyo kwisiseko sokulingana kunye nokuxhamla kwezibonelelo kunye namaqabane.
Sinethemba lokuba uya kuba ngumxhasi wakho wegolide kunye neqabane lakho kwicandelo lefama . Ngezixhobo zokusebenza zesiseko sobugcisa kunye neqela labachwephesha abanamava, kunye nabasebenzi abanobuchule, siqinisekisa ukubonelela ngeemveliso eziphezulu eziphezulu ngamaxabiso aphezulu okhuphiswano ubuncinci ngexesha elikhokelayo. Ukulandela ezi zinto zinqwenelekayo zeshishini; Inkampani ineempahla ezizezayo ezivela kubathengi bayo kwihlabathi jikelele.
Ukukhetha thina njengeqabane lakho kwicandelo lokushishina ngeefama kunokukunceda uphephe ukuchitha ixesha elininzi kunye nemali, kodwa kukuzisa isithembiso esibalulekileyo sehlabathi.
Sizinikezela ngamandla ekunikezeleni ixesha kunye neyona nkonzo intle kwimveliso nganye esiyifumana naphi na emhlabeni. kunjalo, Uphuculo oluqhubekayo kwiinkonzo kunye nomgangatho wethu luxanduva lwethu olukhulu lomsebenzi ngamnye kwinkampani yethu.